Jabra Elite 75t, kuongororwa kwechigadzirwa chakakomberedza | Gadget nhau
Tinoenderera mberi kuongorora zvigadzirwa zvemumhanzi, kunyanya mahedhifoni TWS yezvakasiyana zvakanyanya zvigadzirwa kuitira kuti vakupe imwe nzira patafura uye kufambisa sarudzo yechigadzirwa chinokodzera zvese zvaunoda uye hupfumi hwako, uye nenzira iyoyo yezvinhu, mahedhifoni matsva anosvika patafura yedu. ongororo.
Tiri kutaura nezve chimwe chezvigadzirwa zveJabra zvakanyanya kukura, maElite 75t mahedhifoni, tsvaga kuongorora kwedu kwakadzama nevhidhiyo uye yakadzama unboxing. Isu tinokuudza izvo ruzivo rwedu rwakave uye kana zvakakodzera kutenga aya maTPS mahedhifoni akataurwa nezvazvo zvakanyanya.
Sezvo pane dzimwe nguva zhinji, isu tine vhidhiyo kumusoro uko kwauchazokwanisa kukoshesa iyo isingabhokisi. Tora mukana kunyorera kuchiteshi chedu, tisiye chero mibvunzo mubhokisi remashoko uye nokudaro ugone kutibatsira kuti tirambe tichiunza rudzi urwu rwezviri mukati, Vakakubvumikisa here? unogona kuzvitenga pamutengo unonakidza paAmazon.
1 Zvishandiso uye dhizaini: Kushanda uye kuramba
2 Unyanzvi uye kurira maitiro
3 Kuzvimiririra uye nhanho yekubatana
4 Unhu hwemumhanzi uye Jabra Sound + app
Zvishandiso uye dhizaini: Kushanda uye kuramba
Tiri kutaura nezve TWS in-nzeve mahedhifoni ane dhizaini yakanyatso kusiyaniswa, chikamu chakamanikidzwa, chisina kureba kunze, uye vanoisa rutsigiro rwavo zvachose padhidhi rakabatanidzwa nenzeve. Ivo vanokwana mushe, uye vanoita kunge vasingawire mumiyedzo yedu yemitambo, asi nekuda kweizvi uchafanirwa kupa mukoti unokodzera nzeve yako chaiyo. Ivo vanoyera zvishoma, kutenderedza 5,5 gramu kune imwe nharembozha, ine yakadzvanywa kwazvo. Muchokwadi, tikapihwa matte mapurasitiki, isu tinogona kutofunga kuti hunhu hwakaringana, chimwe chinhu chiri kure kwazvo kubva pachokwadi, zvinoita sechinhu chinodzivirira mumiedzo yedu uye kureruka kwayo kunokosheswa patinorebesa kushandiswa.
Shit bhokisi uremu: 35 magiramu
Kurema kweyega nhare: 5,5 gramu
Kuyera kwebhokisi: 62.4 x 19.4 x 16.2 mm
Mavara: Dema, grey uye goridhe
Kana iri nyaya yacho, yakareba uye ine hove dhizaini ine yakawanda makakombama, inorema huwandu hwayo 35 gramu uye ine zviratidzo, pamwe ne chiteshi che USB-C kumashure. Iyo inopokana, inobata kubata uye kuumbwa kunotipa isu kunzwa kwehunhu. Hatifanire kukanganwa kuti mahedhifoni aya anozivikanwa IP55, Kunyangwe zvisiri zvekunyudza, uku kupatsanurwa kuchativimbisa zvirinani kuti tinokwanisa kurovedza muviri tisingatyi kutambura nedikita kana nekupopota kushoma.
Unyanzvi uye kurira maitiro
Isu tinotanga nechakakosha chinhu, kurira, isu tine speaker bandwidth ye 20 Hz kusvika 20 kHz yevatauri pavanotamba mimhanzi uye 100 Hz kusvika 8 kHz mune yekufona. Zvayo, inotipa mutyairi kune imwe neimwe 6mm nhare iine simba rakaringana, uye ichaperekedzwa ne mamaikorofoni mana eMEMS izvo zvinotibatsira kuti tipe mafoni akajeka. Kana iwe uchida kuziva kuti mafoni anonzwika sei, unogona kutarisa vhidhiyo, kwatinoita kuyedza maikorofoni, muchidimbu se anodzivirira zvakanaka uye kufona navo, achifunga kuti vane dziviriro pamhepo, zvinogamuchirwa.
Hatina kudzima ruzha, isu tine ruzha rwekudzima ruzha runosimbiswa nechimiro chemapedhi uye izvi zvinoenderana zvakanyanya nemabatiro atinozviisa. Kune izvi, sezvatakambotaura, isu tashandisa mapads avo ehukuru hwakasiyana. Iko kungoita ruzha kukanzura kwakanyatso kubudirira, zvinoratidza kuti vakashanda mune izvi chinhu uye zvinopfuura zvakakwana kubata zvifambiso zveveruzhinji zuva nezuva pasina yakawandisa mafrills.
Kuzvimiririra uye nhanho yekubatana
Kana riri bhatiri, isu hatina yakatarwa dhata nezve mAh iyo yega yega headset inobata pamwe neiyo chaiyo yekuchaja kesi. Ehe, isu tinofanirwa kusimbisa kuti iyo yepazasi base yekodhi yekuchaja inoenderana neiyo waya isina waya neiyo Qi standard. Kana ari iye, iyeKubhadharisa nekukurumidza kuchatibvumidza nemaminetsi gumi nemashanu kusvika makumi matanhatu maminitsi ekuzvitonga, kutora zvishoma kupfuura awa kuti tiite chibharo chakazara.
Memory sync: 8 zvishandiso
Scope: anenge gumi metres
Profiles Bluetooth: HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2.
Nezvechikamu chayo, nekuda kweBluetooth 5.0 yekubatanidza uye ayo anowirirana profiles, kuzvimiririra kwakavimbiswa kwemaawa manomwe kwakanyatsotevedzwa, zvichisiyana zvishoma zvichienderana nevhoriyamu yepamusoro yatakatara.
Unhu hwemumhanzi uye Jabra Sound + app
Aya marudzi ekushandisa, kutendeseka, anotaridzika kwandiri seakakosha kukosha kwakawedzerwa. Via Jabra Inzwi +, inowanikwa kune ese iOS neApple, iwe unozogona kugadzirisa akawanda parameter emahedhifoni ayo anoita kuti ruzivo rwako ruve rwakakwana. Isu tinobva tamisa iyo HearTrhoug Kuti udzikise ruzha rwemhepo, sarudza mubatsiri wezwi, mukana wekutsvaga mahedhifoni uye pamusoro pezvose zviripo zviripo pane App (muvhidhiyo yedu unogona kuzviona zvichiitika).
Kana iri kurira, Jabra Elite 75t Ini ndashamiswa neiyo yakakwira huwandu hwehuwandu hwakapihwa, iyo inovhara zvakanyanya kusavapo kweAlex Noise Cancellation. Nekudaro, iwo mabass akanyanyonyorwa akaratidzirwa ekuda kwangu, chimwe chinhu chatinogona kugadzirisa pamwe nekuenzana kweapp. Mune mamwe matoni, anoita kunge akagadziridzwa uye anopa hunhu hunoenderana chaizvo nemutengo wechigadzirwa.
Chekupedzisira, tichaenda kutaura nezve mutengo, unogona kuzvitenga nezvakanaka zvinopihwa kubva ku € 129 munzvimbo dzakajairika dzekutengesa dzakadai seAmazon kana webhusaiti ye Jabra. Iwe unotoziva kuti isu tinogara tichikurudzira yakanakisa kukosha kwemari. Mune ino kesi iwe une mahedhifoni emumwe mutengo wakakwira uchifunga mashandiro, asi iine vimbiso yekuti Jabra anotarisira, inozivikanwa pasi rese nekuda kwerudzi urwu rwechigadzirwa. Nekudaro, uchifunga kuti vanga vaine nguva yakareba sei vari mumusika, unogona kusarudza dzimwe nzira dzine mutengo uri nani wemari kana kunyangwe nekudzima ruzha.
Yakatumirwa pa: 27 March we2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 26 March we2021
Chikumbiro chakabudirira kwazvo
Dhizaini yekutanga uye unzwe
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Reviews » Jabra Elite 75t, kuongororwa kwechigadzirwa chakakomberedza